တပ်မတော်သားများအား သရုပ်ဆောင်မြနှင်းရည်လွင်၏ မေတ္တာရပ်ခံချက် ကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ… – PVTV Myanmar
တပ်မတော်သားများအား သရုပ်ဆောင်မြနှင်းရည်လွင်၏ မေတ္တာရပ်ခံချက် ကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 60K Share – 8461
Myat Khine says:
2021-08-09 at 7:13 PM
It’s too late to accept them.
They are dangerous. Shouldn’t take risk.
2021-08-09 at 7:16 PM
ဒီကိစ္စမျိုးက အာဏာမသိမ်းခင်ကတည်းက တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ တပ်ရင်း တပ်မ တွေမှာရှိတဲ့ ဗိုလ်ကြီး ဗိုလ်မှူး တပ်ရင်းမှူးနှင့်တစ်ခြားအရာရှိဆင့်တွေကို အကြိုတင်ပြီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ထားရမဲ့ကိစ္စမျိုးပါ အခုမှတပ်မတော်သားများကိုစစ်တန်းလျားပြန်ပါလို့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးရတော့မှာလဲ
Taungyoe Maung says:
Moe Myat Myat Tun says:
အမိန့်ဆိုတဲ့ စကားကခေါက်ရိုးကျိုး နေပါပြီ အရိုးကိုက်နေရတဲ့ဘဝမှန်းမသိပဲ အသိစိတ်ပျောက်နေတာပါ အခုချိန်အရမ်းလည်းနောက်ကျသွားပါပြီ ငါတို့ပြည်သူတွေအသက်တွေရင်းထားရသလောက် သူတို့လည်း ပြန်ပေးဆပ်ရလိမ့်မယ် မကြာတော့ပါဘူး
ဒီအသံ​တေကိုစစ်တန်းလျှား​တေမှာကြားရ​အောင် drone ကိုအသံချဲ့စက်တပ်ပီလွတ်ဖွင့်​ပေးလိုက်ပါ
Tin Aung Koe says:
2021-08-09 at 7:51 PM
ဒါမှ ဒါပေါ့ ကွ
Suu Latt Za says:
2021-08-09 at 8:01 PM
ညီမ​လေး​ပြေတာ​ကောင်းပါတယ် ဒါ​ပေမယ့် ​ဒေဝဒတ်​နောက်​လိုက်တွေဆိုတာ ​ဒေဝဒတ်ရဲ့ ယဥကိုပဲ မ​ နေရမှပဲ
မေတ္တာနဲ့ပြောဆိုဖြောင်းဖျ လို့ရ တဲ့သူတွေထဲမွာ အဲ့ အလေ့ကျ တွေမပါဘူး။အသိတရားရွိရင် နဂိုကတည်းက မအလ ခိုင်းတိုင်း ကိုယ်ရောစိတ်ပါ လိုက်မလုပ်ဘူး!!
2021-08-09 at 8:03 PM
■နဂို​ တွေက​တော့ နဂိုင်းပဲ ထွက်လာလိမ့်မယ်။
■ဒီပုတ်ထဲမှာ ဒီပဲ​တွေဘဲ ကျန်ပါ​တော့တယ်။
ခေါ်မနေပါ နဲ့ ဦးနှောက်အဆေးခံထားရတော့ ခေါ်လဲရမှာမဟုတ်တော့ သူတို့ အဘ နှင့် အတူရောအမှုန့်ကြိတ်ပြစ်မှကိုရမှာ (အရေးတော်ပုံ နိူင်နေပါပြီ)
Kolin Carworkshop says:
2021-08-09 at 8:15 PM
တကယ်တော့ ဒီစကားက အမပြောတာထက်
NUG ထဲက ဝန်ကြီးအကြီးအကဲတွေက နေ့တိုင်းနီးပါး ပြောတဲ့မိန့်ခွန်းတိုင်းမှာမေတ္တာခံရမှာပါ ပြောကြရမှာပါ အမြဲအားပေးနေပါတယ် ငြိမ်းချမ်းနဲ့မြန်မှာပြည်ကြီး အမြန်ဖြစ်ပါစေ
ဖိုး ျပည့္ says:
နွား​ ပလာတာသွား​ကျွေးသလိုဖြစ်​နေပီ တပ်မ​တော်သား​တွေ ဆိုတာ မအလ ရဲ့ဒူးမနာသား​​တွေပဲ ပြည်သူဆိုတာ မသိဘူးမရှိဘူး သူတို့ပ​ထွေးက ​သေဆို​သေရှင်ဆိုရှင် ဒါပဲသိတဲ့ဟာ​တွေ
Thanwin Aung says:
အမြန်ဆုံးအောင်ရမည် ။ 💯
တပ်မတော်ဆိုတာ ပြည်သူအတွက် ဒိုင်း တဲ့
ဒိုင်း၊လွှား၊ကာ၊ ဆိုတဲ့အထဲက ဒိုင်းဆိုတဲ့ အကာအကွယ်ပစ္စည်းကိုပြောတာပါ
ရေးတာမှန်လားတော့မသိဘူး ပြောချင်တာကိုတော့ နားလည်မှာပါ
Zin Min Htet says:
​ခွေးမြီး​ကောက် ကျီ​တောက်စွပ် ​တွေ…
ထွက်ခိုင်းချင် အ​သေ ထွက် ထွက်ခိုင်းမှ ရမှာ 😥😥😥
2021-08-09 at 8:28 PM
အစကတည်းက မဲမသမာမှု့ကို ဖြေရှင်းဖို့ပြောဖို့လိုတယ် ။ မဲများတာနဲ့ မဲမသမာမှု့ကို ဖြေလျှော့ရဖို့ မေ့ပစ်ဖို့ အစိုးရဖွဲ့ခွင့်ပြုဖို့ဆိုတာ မတရားမှု့ပဲ ဒီတော့ အရာအားလုံးဟာ တန်ရာတန်ကြေးပဲ ။ ဒို့ပြည်သူတွေလဲ မတရားတာကို တရားတယ်ထင်ပီး အမှန်ပါ ပြောနေရင် တန်ရာတန်ကြေးတွေပဲ ထပ်ရလိမ့်မယ် ဒီတော့ တွေးပါ ကြံပါ ဟုတ် မဟုတ် စဥ်းစားပါ ။
2021-08-09 at 8:52 PM
မြန်မာနိုင်ငံက အောက်ခြေတပ်သားဆိုတာ အိမ်ခြေယာခြေမရှိလို့ စားရမယ်သောက်ရမယ့်ခိုကိုးအားကိုးရာမဲ့လို့ ဝင်တဲ့သူ၊ ဘဝပျက်လို့ဝင်တဲ့သူ၊အိမ် ( သို့ ) လူ့မူ့ဝန်ကျင်တဲ့အတိုက်အခံဖြစ်ပြီးဝင်တဲ့သူ ရှင်းရှင်းဘွင်းဘွင်း အားမနာတမ်းပြောရရင်တော့ အရွယ်သာရှိပြီး ဘာမှမရှိတော့တဲ့လူ့ဗလာတော်တော်များများဟာ အောက်ခြေတပ်သားတွေဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးမဟုတ်ရင်တော့ အများဆုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရတဲ့အနေအထားပါ။ဒါ့ကြောင့်ဘဝရင်းပြီး အသက်နဲ့ရင်းပြီး ဆုံးဖြတ်ရမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းမှာသူတို့ဟာကိုယ်ပိုင်မဖြစ်ခဲ့ကြဘူး။အထက်အမိန့်ဆိုတဲ့ဂျင်းသံသာရာမှာ သူတို့လည်နေတာ တိုင်ပတ်နေတာများပါတယ်။အဲ့လူကယူတဲ့အမျိုးသမီး သားသမီးတွေဟာ အဲ့လိုဂျင်းဝဲဂယက်ထဲထပ်ရောက်ပြီး မျိုးချစ်သလိုလိုနဲ့ အဘချစ်ဖြစ်သွားတော့တာပါဘဲ။အမှန်တော့ ကျတော်တို့တွေစစ်ဗိုလ်သိပ်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါ အမှတ်လည်းမှီပါတယ် တက်ခွင့်လည်းရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စည်းမျဥ်းဟာအရမ်းပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့လေ့လာချက်အရ ရည်မှန်းချက်ကို အဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကြီးကိုလေ ပြည်သူတွေလေးစားချစ်ခင်ပြီးစစ်တပ်အလုပ်စစ်တပ်လုပ်ပြီး ခေတ်မှီမြင့်မားပြီး လူသားဆန်တဲ့စစ်တပ်ကြီး ဖြစ်စေချင်တယ်။ခုတော့ မြန်မာစစ်တပ်ကြီးကလေ ကျွန်တော်တို့လူငယ်အမြင်နဲ့ပြောရရင် ငပေါကြီး ဖြစ်နေတယ်။
Zaw Linn Oo says:
အဲ့လိုပြောလို့ စခ ရခ တွေကနားလည်ပါ့မလား
ဒီကောင်တွေက တစ်သွေး တစ်သံ တစ်မိန့်
နဲ့ဒစ်လည်နေတာနှစ်ပေါင်း 60 ကျော်သွားပီ
2021-08-09 at 9:07 PM
သူတို့ရဲ့ နားတွေမျက်စိတွေ အပိတ်ခံထားရတယ်
U Lay Maung says:
တကယ်တော့ တပ်မတော်များသာ ပြည်သူနဲ့ တကယ် အစစ် အမှန် လက်တွဲလာရင် စကစ အာဏာ ရူးတွေ တိုင်းပြည်ကို ဖျက်စီး လို့ ဘယ်ရတော့မလဲ။ အခု က တခဏ သွေးရူးနေတဲ့သူ ကို တပ်မတော်သားတွေ ကပ်ဖာမနေသင့်ဘူး။။ သင်တို့ရဲ့ တာဝန်က ပြည်သူကို ကယ်တင်ဖို့၊ စောင့်ရှောက်ဖို့။ အခုက အချိန်ကောင်းပါ။ အဖေကျော် ဒွေးတော် ဖြစ်မနေကြပါနဲ့။ ပြောမရရင်တော့ နွားအဖြစ် ၊ သမိုင်းတင် ခံရမယ်။ နွားစာရင်းတွေ အကုန်ပြည်သူက သိတယ်နော်။ ပြည်သူပြစ်ဒဏ် ဦးစော၊ နေဝင်း၊ သန်းရွှေ တောင် မခံနိုင်ဘူး။ သမိုင်းကြောင်း မလှရှာဘူး။ 0k?
2021-08-09 at 9:22 PM
မြရည် နှင်းလွင် ကို ဒီလို လေး ပြန်တွေ့ရလို့ အရမ်းကို ဝမ်းသာပါတယ်။
Tekka Sila says:
စစ်တပ်ကို ကြီးကြီးမားမား ​ပြောင်းလဲနိုင်မှ နိုင်ငံ ​အေးချမ်းသာယာ တိုးတက်မယ်။
2021-08-09 at 10:37 PM
Aûñĝ Zíñ Wíñ says:
2021-08-10 at 2:20 AM
ဖိုးစည်‌ေဂါင်းကြီးတို့ မင်းတို့ တန်လျားကိုမပြန်ရင် ပစ်မှားနော်😂😂 ပြီးမှ သားမပါဘူး မလုပ်နဲ့
Hla Myint Htun says:
2021-08-10 at 3:01 AM
အေရးျကီးဆုံးကဖြဲ ႔စည္းပုံ ၈၈ ကေန ယေန့ထိ မဆြဲႏုိင္ဘူး ၁၉၉၀မွာ မဲနုိင္ေပမယ့္ ဖြဲ႔စည္းပုံမရွိလုိ့ အာဏာမရခဲ႔ဘူး 2020ထိ ၅ နွစ္အုပ္ခ်ုပ္ခြင့္ရတဟ္ ဖြဲ႔စည္းပုံမေရးနုိင္ဘူး ယေန့ nug crph ဖြဲ႔စည္းပုံမေရးနုိင္ဘူး စိတ္ကူးလဲရွိမထင္ဘူး အေရးျကီးတာ သိျကေပမယ့္ မရုိးသားစိတ္က်န္ေနတာလား ျပည္သူနဲ႔ ျပည္ပကုိအားကုိးလြန္းတာလား ယုံျငည္မွုအားနည္းပီး ဖြဲ႔စည္းပုံေရးလုိ့ အမွားပါခဲ႔လုိ့ သမုိင္းတရားခံျဖစ္မွာကုိေတြးပီးအေျကာက္လြန္ေနတာလား မရင္းရဲ အမုန္းမခံရဲတာလား လက္ရွိ aeo ေတြ အင္နဲ႔အားနဲ႔ မပူးေပါင္းတာ ျပည္သူေတြ ထင္သဆလာက္မပါဝင္တာ မပြင့္လင္းလုိ့ ဖြဲ႔စည္းပုံမူျကမ္းတိတိပပ ခ်မျပရဲလုိ့ဆုိတာ သိသင့္တယ္ နုိင္ငံေရးကုိ လုပ္စားအသုံးခ် မျဖစ္ဖု့လုိတယ္
ဗိုလ္ေစာ ဗိုလ္ေစာ says:
2021-08-10 at 9:41 AM
လေးစားပါတယ် အရာရာကို ဂရုစိုက်ပါ အရေးတော်ပုံကြီး အောင်ရမည်
2021-08-10 at 11:58 AM
2021-08-10 at 3:49 PM
1st noVember 2021 V-Day
မြန်မာပြည်သူများခင်ဗျာ ။ ။
၁။ မကြာခင်ရက် (၁) ရက်ကိုသတ်မှတ်ထားရမည်။1st noVember 2021 V-Day
၂။ ဒီမိုကရေစီကိုလိုလားသော တိုင်းရင်းသားအားလုံးပါဝင်၍ ၎င်းသတ်မှတ်ရက်တွင် အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုလက်နက်အပြည့်အစုံဖြင့်ရင်ဆိုင်ရန်ပြင်ဆင်ရမည်။
၃။ လူတိုင်းသည် မီးပုလင်းများ ၊ ဓားများ၊ လေးနှင့်မြှားများ၊ တုတ်များ၊ သေနတ်စသည်နှင့်ချွန်ထက်သောလက်နက်မျိုးစုံဖြင့်နာကျင်၊ ထိခိုက်နိုင်မည့် မည်သည့်လက်နက်မဆို ပြင်ဆင်၍ ပါဝင်ကြရမည်။
4။ နေ့လည် ၁၂ နာရီအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက လက်နက်ချရန် အချိန်ပေးရမည်။
၅။၎င်းနေ့မတိုင်မီတွင် မီဒီယာများဖြင့်ဆက်သွယ်ထား၍ ပြင်ဆင်ထားဖြစ်ရမည်။
၆။ သံပုံးတီးသောကာလကုန်သွားပြီးဖြစ်လို့ ဒီအချိန်မှာလမ်းမပေါ်မှာ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲချရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
၇။ ၎င်းအကြမ်းဖက်အုပ်စုက တစ်နေ့ထဲမှာ ၅၃သန်းသောပြည်သူကို ပစ်သတ်ရန် ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါ။
၈။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနှင့်ပတ်သက်၍ ကမ်းလှမ်းချက်ကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများက သိစေရန် အနည်းဆုံး (၄) ပါတ်ခန့်ကြိုတင်အကြောင်းကြားသတင်းဖြန့်ဖြူးထားရမည်။ ၎င်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနှင့်မီဒီယာများက စောင့်ကြည့်စေရမည်။
၉။၎င်းနေ့တွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများက အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ အကြမ်းဖက်ရက်စက်မှု့ကို မြင်တွေ့နိုင်အောင်ပေါ်လွင်အောင်ဆောင်ရွက်ရမည်။
၁၀။ ဤပုံစံအတိုင်း ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ခဲ့ဖူးသည်။
နွေဦးတော်လှန်ရေးကို ကိုယ်တိုင်ကိိုယ်ကျ မပါဝင်နိုင်ခဲ့ရင် အခြားနိုင်ငံတကာရဲ့ အကူအညီကို မရနိုင်တာကြောင့် မည်သူကိုမျှ အပြစ်မတင်သင့်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ Facebook ဖေ့ဘုတ် ၊ Instagram နှင့် မိမိရဲ့Messenger မတ်ဆင်ဂျာတွင် ဖြန့်ဝေပါ။ ။
Our troubles can end in one day. But many can die.
The plan is …..
1. One day must be set soon.
2. All pro-democracy ethnic groups must be prepared to face the coup d’état on that date, fully armed.
3. Everyone has light bulbs, Swords; Bows and arrows; Sticks Pain withavariety of sharp weapons, including guns. Any weapon that may be damaged must be prepared and involved.
4. The terrorist regime must give time to surrender by 12 noon.
5. Must be prepared and communicated with the media prior to that date.
6. Now that the ironclad era is over, it is time forastreet confrontation.
7. It is impossible for this terrorist group to kill 53 million people in one day.
8. At least four weeks notice must be given to let the world know about the offer ofaterrorist military council. The world and the media need to keep an eye on this.
On this day, the nations of the world must see the atrocities committed by the Council of Terrorists.
10. The French Revolution was successful in this way.
“The uprising must succeed”
No one should be blamed for not being able to get other international help if I could have personally participated in the Spring Revolution.
Please Facebook, Share on Instagram and your Messenger messenger.
2021-08-10 at 3:58 PM
U Aike Khun says:
ရီရတာ ပါးကို ေညာင်း..သွား.
Win Myo Hein says:
2021-08-10 at 8:07 PM
တော်လှန်ရေး အောင်မြင် ပြီး သွား ရင်
အခြေခံပြည်သူအားလုံးကို ရှိသမျှအခွန်တွေက ကင်းလွတ် ခွင့် ပေး ကြ ပါ ။
Phyos Moe says:
2021-08-11 at 2:39 AM
အခုချိန်မှတော့ ဒင်းတို့ကို သွားပြောနေလဲ ဘာမှ မထူးတော့ပါဘူး မမမြရေ
ကိုထန္းသား ကိုထန္းသား says:
လုပ္ရပ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး စာစကားလံုးမိႈင္းေတြအမ်ဳိးမ်ဳိးသံုးၿပီး ျပည္သူေတြ ကို အိမ္ၾကက္ခ်င္းအိုမဲသုတ္ နားလွည့္ပါး႐ိုက္ ေသြးခြဲသတ္လွ်ဳိ ရန္တိုက္ ရန္ျဖစ္ ခိုင္းၿပီး တိုင္းျပည္ လူမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ စာေပ ယဥ္ေက်းမႈ အလကၤာ ရသ ေတြ ဖ်က္ဆီးတဲ့ ဒီလိုဒီလို အဖ်က္သမားေတြ အလိုမရိွ အျမန္ဆံုး က်႐ံႈးေပ်ာက္ကြယ္ပါေစ
Paing Soe Thaw says:
2021-08-11 at 12:07 PM
အခုထိ အောက်ခြေ က ကောင်တွေ စည်းရုံးလို့မပြီးသေးဘူးလား ဘာမှ ခုချိန်မှ ထပြီး ဆွယ်နေစရာမလိုဘူး အခုမှ ဝင်လဲ ထွန်းတောက်နိူင်လို ကောင်မျိုးတွေပဲဖြစ်မှာပါ လီးပဲ ရန်သူကို ရန်သူစရိုက်နဲ့တုံ့ပြန်ရတယ် မယုတ်မာနဲ့ ရတယ် ရက်စက်ရမယ် မသနားရဘူး သူတော်ကောင်းစရိုက် တွေ မေတ္တာရှင်ကြီး လုပ်လို့ကတော့ တသက်လုံး ဖင်ခံနေရမယ် နောက်မျိုးဆက်၃ဆက်စာလောက်
BrangAwng KaChain says:
2021-08-13 at 8:56 AM
မဂ်လာပါ ခများ လေးစာစွာ ဖြင့် ဂုံယူပါ သည်